पूर्व मन्त्रीहरु गिरफ्तार ! यस्तो छ कारण — Motivatenews.Com
पूर्व मन्त्रीहरु गिरफ्तार ! यस्तो छ कारण
Posted on April 15, 2019 by Motivate news
काठमाण्डौ । सुडानमा पूर्व मन्त्रीहरु पक्राउ पर्न थालेका छन् । राष्ट्रपति ओमार बशीरलाई पदच्युत गरेर सत्ता हातमा लिएको सेनाले बशीर नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि पक्राउ गरेको तर उनीहरुको नाम भने नखुलाइएको बीबीसीले जनाएको छ ।
गएको हप्ता झण्डै ३० बर्ष शासन चलाएका राष्ट्रपति बशीरलाई हटाएर सेना प्रमुख अबाद इफ औफले आफैलाई रक्षामन्त्री घोषणा गरेका थिए । तर राष्ट्रपति बशीरका समर्थक र सुडानका नागरिकले सडक प्रदर्शन चर्काएपछि उनले पदत्याग गर्दै लेफ्टिनेन्ट जनरल बुर्हानलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरेका छन् । –एजेन्सीको सहयोगमा